Mummy - isipho imvelo esetshenziswa isikhathi eside ukwelapha izifo ezihlukahlukene futhi kuthuthukisa ukubukeka kwayo. Inethiwekhi nezincwadi kukhona isibalo esikhulu izihloko ngalokho okushiwo isisindo ukulahlekelwa futhi isiza kanjani ukulwa emelene elula zokubhala kanye cellulite. Uma ufuna ukuthola noma ngabe lokhu kuyiqiniso noma cha, kudingeka wazi indlela yokwakheka ndaba futhi izenzo ukuthi ungaba emizimbeni yethu.
Shilajit-Altai, ukusetshenziswa okuyinto, njengoba besho, kusiza balahle ezihlukahlukene nemibi ubukeka - kuyinto engokwemvelo mass black nge iphunga kanye ukunambitheka ababayo, okusikhumbuza ngokubukeka resin. Khiphela ke kusukela izimbobo yamadwala futhi entabeni agcwalise. Ngale ndlela-ke Kudume kubhekiselwa kuye ngokuthi "resin entabeni."
Shilajit Gorno-Altaisk - kungcono ngokuphelele zemvelo ingxenye emnyama obunsundu. Ukwakheka yakhiwa izinto wezinto ezingaphili futhi organic. Ngokuvamile futhi uthole ukungcola yesihlabathi itshe ochotshoziwe: lokhu iyisici evamile yemvelo.
Esikhathini e-Altai, kanye nezinye izifunda, lapho izidakamizwa ikhiqizwa, uye njalo yasetshenziswa ekwelapheni. Cosmetology Modern inikeza usizo lwakhe ukuze azame ukuqeda elula amamaki, futhi ulahlekelwe isisindo.
Intaba resin nethonya elikhulu ngempela esikhumbeni. Owenza usebenze kwegazi, ngenxa okuyinto buya redox izinqubo evamile emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ukukhula asebenzayo kunamaqoqo amangqamuzana esikhumba entsha futhi ukuvuselelwa. Umzimba is bahlanza by izinto ezihlukahlukene elimazayo futhi umisa izinqubo umzimba, lapho ukulahlekelwa isisindo kwenzeka.
It unezimfanelo ezithakazelisayo Altaian mumie. isicelo sayo kungenzeka lezi zifo ezilandelayo:
ngaphakathi nangaphandle njengoba germicide;
zegazi ezibangelwa: ukulungiselela izibuyekezo, ke uyazihlanza igazi;
izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala;
yezifo kwesibindi nezinso;
e iziyaluyalu pheshana emathunjini;
izifo of the ephakathi kanye neuropathy isimiso sezinzwa;
ngesikhathi zagnoeniyah inflammations kanye nolwelwesi lwamafinyila;
uma umonakalo kwezicubu ezahlukene i umzimba;
ongaphakeme amasosha omzimba ukuntula amino acid kanye izinto ezimbiwa phansi, khona izifo.
Indlela yokusebenzisa mummy?
Ngo zokwelapha mkhuba wasendulo e-India, Mongolia naseTibet ubumbe indlela enhle kakhulu ukwelashwa nge izidakamizwa. Yena lalikhona namuhla imi kanje: reception kwezinsuku ezingu-10, i-break izinsuku ezingu-10 ka, ukuthatha izinsuku ezingu-10. Ukugcina le ndlela akufaki kungenzeka kokuthola okuvela yini imiphumela emibi uma usebenzisa Altaian mumie.
Ukusebenzisa izidakamizwa wenziwa kuphela ngesimo ziyoncibilika emanzini. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba sihlanganise ukusetshenziswa zangaphakathi nezangaphandle, uma isifo kusikisela kwakungenzeka lokhu.
Neminye ne mummy
Okwenziwayo umzimba ukuzinza mumie. Umzimba ngokweqile kwabantu abakhuluphele uqale usebenzise ama-kilojoule asebenzayo okuningi uma ukusebenzisa leli thuluzi. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa kunganciphisa umuzwa ekulambeni nasekomeni, ekuqedeni kanyekanye izinkinga ne ukuvuvukala noma wokugaya ukudla.
Imayini resin ubuthongo kuholela evamile, ngakho-ke, kuthuthukisa impilo jikelele we umzimba, uma udle Altaian mumie, ukusetshenziswa okuyinto ethandwa kangaka phakathi ntu azi. By the way, ukunciphisa umzimba ngokushesha futhi kahle, udinga ukulala ngokwanele. Kufanele kuqashelwe - ososayensi baye babonisa ukuthi nzuzo isisindo ngokuvamile odlulela kithi nokungalali.
Shilajit kubalulekile ukuthatha ilungelo, ukuze babe nethonya elihle emzimbeni. Ngakho ukuncipha uyalisebenzisa yini leli thuluzi yimihlangano wamathumbu ihlanzekile, usimamise umzimba futhi kujwayeleke ubuthongo.
Ngaphambi kokuqala inkambo reception mummy (umyalelo uzobe enikezwa esihlokweni ngezansi), okuyinto angathengwa at Pharmacy, kubalulekile ukulungiselela umzimba. Kuyinto izinsuku ezimbalwa ukuya ukudla, kusiza ahlanze. Akubalulekile ukuba azibulale, udinga nje ukubeka eceleni kusukela ekudleni ufulawa amnandi, ngibhema, okubabayo futhi ethosiwe. Ingabe amanzi odwa, akhohlwe ukuphuza utshwala phakathi isicelo se-resin entabeni.
Kuyadingeka ukuba ungene ekudleni ngaphezulu izithelo nemifino, kwasolwandle. Ungakwazi uphuze amanzi ayo, kodwa fresh kakhulu. Futhi ucabange green tea. Yehla Good endaweni okugeza noma sauna ukuze umzimba ukususa amanzi angadingeki bese ukuyihlanza.
emithonjeni ehlukene ingatholakala kunemibono ehlukahlukene kanjani ukuthatha amaphilisi mummy Altai. Ochwepheshe batusa unganikeli umzimba ngesikhathi esisodwa angaphezu kuka 0.2 g (1 tablet) yalesi material.
Nakuba ungenza ekuqaleni kule Isikali:
uma isisindo sakho kufika ku-70 kg, umthamo owodwa uzodinga 0.2 g;
kuya ku-80 kg - 0.3 g;
90 kg - 0.4 g;
engaphezu kuka-90 kg - 0.5 g
Kungcono ukuphuza amaphilisi ekuseni esiswini esingenalutho, ngaphezu, kusihlwa amahora amathathu emva esidlweni sokugcina. Awukwazi ukuthatha mummy, ukulaya ukusetshenziswa is ebiyelwe zonke iphakethe, bengaphumuli amasonto angaphezu kuka emithathu ilandelana. Ukuze ulahlekelwe isisindo, njengoba kuchazwe umkhiqizo singasetshenziswa ngaphandle.
Uma kukhona inkinga, njengoba cellulite, kubalulekile ukuqala hhayi kuphela ukuthatha ezihlukahlukene supplements kanye ukudla ngendlela efanele, kodwa futhi ukusebenza ezindaweni inkinga esikhumbeni. Cream eliqukethe mummy, ukukusiza kulesi simo. Lokhu kusho ungakwazi ukwengeza nelivamile yakho ukhilimu anti-cellulite basihlikihle ingxube zingene ezindaweni inkinga. Ungenza iningi umuthi onjalo. Ukuze lokhu kuyadingeka ukuncibilikisa 2 g ezidunjini ezomisiwe e spoon yamanzi. Ingxube ingezwe ku-100 g ukhilimu, okungcono izingane. izindlela Tholakele isicelo kanye ngosuku.
Ukuze Mummy, izithombe ongawabona kulesi sihloko, impahla yayo kungukuthi elahlekile, okhilimu okuphekiwe kumele igcinwe esiqandisini for lungene ngesonto.
Cream eyenziwe iresiphi ecacisiwe lungasetshenziswa yokugoqa. Kusukela kubalulekile futhi lokunikeza abantu abane umonakalo isikhumba ezinzima noma izitsha esicindezelekile.
Ukhilimu kufanele ngobumnene wagcoba esikhunjeni. Khona-ke le sayithi kuyadingeka ukuze ugoqe emzimbeni nomzimba omncane epulasitikini ukuthi kungabangela igazi ligeleze indawo oyifunayo futhi ukwandisa izinqubo umzimba emzimbeni. Ngemva ukhilimu is wageza off, udinga ukuba sigqoke ngokufudumele.
Sezinso futhi isibindi
Uzodinga amaphilisi namanzi Altai mummy. amaphilisi 5 ukuncibilikisa izidakamizwa e 1 litre amanzi. Ukwakheka yokugcina okufanele zithathwe kathathu ngosuku 20 ml. Kungcono ukuwaphuza ijusi fresh beet. Ngemva kwezinsuku ezingu-10 yokwelashwa edinga ukuphumula izinsuku 3 bese uphinda.
Relax and ukusiza ulahlekelwe isisindo okugeza, okuzokwenza ukungezwa ukuhlanzwa Altai mummy. Bangu-5 g yaleli ejenti siyochithwa e 0.5 amalitha amanzi afudumele. Ukwakheka uthele kubhavu, okuyinto wabe eseyiswa emizuzwini engu-30. Ungakwazi oyi-ushawa efudumele, ezimbotsheni wavula kangcono.
In izifo kwesinye urinary
0.2 g we mummy ukuphuza ubisi olufudumele kathathu ngosuku, ngobusuku obubodwa ukwenza douching isixazululo okulungiselelwe (1 g we mummy isigamu ingilazi yamanzi afudumele).
Thatha 0.2 g uju noma ubisi dvzhdy ngosuku: ekuseni kakhulu lantambama ezimisa okwensuku 26. Kulesi yokutakula kwenzeka 2 amaviki. Sebenzisa izifo ukuvuvukala kanye nomzimba, imikhuhlane, umphimbo obuhlungu, ukukhwehlela.
Ngo somoya bronchial
Thatha Altai mummy, ekusetshenzisweni ayinhloko emfundo esiyinikezwa kulesi sihloko, 0.2 g kanye uju noma ubisi yenkomo fat ekuseni esiswini esingenalutho, ngaphezu, kusihlwa ngaphambi iholide. Lungiselela izidakamizwa Ingxenye 1:20. Udinga ukuya 3 ukwelashwa, ngalinye elikwazi luthatha izinsuku 28.
Shilajit Altai (izibuyekezo ngalokhu ukulungiselela ngokuyisimangaliso kungatholakala esihlokweni ngezansi), thatha 1-2 ezibhebheni a ¼ enkomishini yamanzi ngaphakathi nge ukulibopha ezakha yabalingisi noma on endaweni ethintekile. Lokhu indlela yokwelashwa singemaviki lange 4, uma kunesidingo, kungaba liphindwe emva kwezinsuku 10. Fitizela ukwenza ngaphandle kokuphazamiseka.
Lactation futhi sokukhulelwa umntwana.
Ubudala iminyaka engu-12.
Izinkinga isimiso sezinzwa esiyinhloko.
Ngisho noma kungekho contraindications lokhu uhlu ngaphambi kokuqala ukuthatha mummy Gorno-Altaisk, kutuswa ukuba uthintane onguchwepheshe.
Kusukela imininingwane engenhla kuyacaca ukuthi imbangela eqondile kwesisindo mummy akuyona. It is eqinisweni into eyingqayizivele yenziwe ngohlobo emangalisayo, lapho enza izinhlelo ezihlukahlukene futhi kuqinisa umzimba. Ngenxa yalokho, kuba ngezithukuthuku umsebenzi omisiwe yomzimba eqala ukuhamba isisindo esengeziwe. Kodwa ukuze sifinyelele osheshayo kwesisindo ngosizo leli thuluzi akunakwenzeka.
Shilajit Altai: Izibuyekezo
Phakathi kwazo zonke izibuyekezo, okuyinto namuhla ingatholakala kwi-inthanethi mayelana leli thuluzi, zikhona eziningana evamile. Ngakho, abesifazane abaningi beziqhayisa ukuthi ne mummy, bakwazi ukulolonga isikhumba, ukuqeda cellulite, kanye nezinye ukukhubazeka ebonakalayo dermis. Othile Uyazazisa yokuthi ngemva ukudlula Yiqiniso kahle uqala ukuba ngazizwa kangcono ngenkathi ukuncipha. Kodwa kukhona nalabo ababonisa umoya ukungeneliseki ethi Izimo.
Kuyini futhi lokho kuyasiza moss Irish? Izici and izakhiwo isitshalo esiyingqayizivele
Wamafutha Ngokuyisimangaliso izifo 100: ukulungiselela kanye nokubuyekeza